रेश नुन्थला माध्यमिक विद्यालयमा एक करोडको अक्षयकोष::Online News Portal from State No. 4
रेश नुन्थला माध्यमिक विद्यालयमा एक करोडको अक्षयकोष
बागलुङ, १८ जेठ – गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको शैक्षिक क्रियाकलापमा सघाउने भन्दै यहाँको एक विद्यालयले एक करोड रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गर्ने भएको छ । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–७ रेशमा रहेको रेश नुन्थला माध्यमिक विद्यालयले एक करोडको अक्षयकोष स्थापना गर्न लागेको हो । शैक्षिक सुधार तथा अक्षयकोष स्थापनाका लागि भन्दै रकम जुटाउन विद्यालयले शैक्षिक महोत्सव आयोजना गरेको थियो । शुक्रबार विद्यालयमा एक समारोहको आयोजना गर्दै विद्यालयले आम्दानी खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्दै विपन्न विद्यार्थीको शैक्षिक क्रियाकलापमा सघाउने गरी अक्षयकोष स्थापनाको घोषणा गरेको हो । उक्त रकम जुटाउनका लागि विद्यालयले गत बैशाख ३१ देखि जेठको ४ गतेसम्म शैक्षिक महोत्सव आयोजना गरेको थियो ।
महोत्सवको अवसरमा प्राप्त भएको सहयोग र बिद्यालयले गत बर्षदेखि नै चलाउँदै आएको सहयोग गरौं अभियानका क्रममा संकलित रकमबाट अक्षयकोष लगायत शैक्षिक सुधारका काम हुने छन् ।
विद्यालयमा प्राबिधिक धारको कक्षा सञ्चालन, व्यवसायीक शिक्षाको सुधार लगायतका कामको थालनी गरिने प्राधानाध्यापक ओमबहादुर थापाले बताए । शैक्षिक महोत्सव तथा सहयोग गरौं अभियानबाट १ करोड ७७ लाख १३ हजार ३ सय १९ रुपैयाँ संकलन भएको थापाले जानकारी दिए । उक्त रकममध्ये ९ लाख रुपैयाँ बराबरको जग्गा रहेकनो छ । विद्यालयले २०७२ सालको बार्षिकोत्सवबाट सहयोग गरौं अभियान सञ्चालनमा ल्याएको थियो भने २०७६ सालमा शैक्षिक महोत्सवनै आयोजना गरेको थियो । अभियान सञ्चालन तथा महोत्सवमा २७ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भएको प्रधानाध्यापक थापाले बताए ।
कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मीन बहादुर थापा, सदस्य जगन्‍नाथ गौतम, पूर्व अध्यक्ष चित्र बहादुर कार्की, सहयोग दाताको तर्फबाट दान बहादुर जिसी, वडा सदस्य कृष्ण थापा, मुक्तिराम थापा, रुपा किसान, वडा सचिव होमनाथ शर्मा, जनकल्याण आधारभूत विद्यालयका प्र.अ. थम्मन जिसी लगायतले मन्तब्य राखेका थिए ।